हङकङमा नेपाली रेस्टुरेन्टमा आगलागी: ७ जनाको मृत्यु, १० जना घाइते - VOICE OF NEPAL
१ मंसिर २०७७, सोमबार ०५:२५
हङकङमा एक नेपाली रेस्टुरेन्टमा आगलागी हुँदा कम्तिमा ७ जनाको मृत्यु भएको छ । आगलागीको घटनामा अन्य १० जना घाइते भएका छन् ।
साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार हङकङ याउमाइतेइको क्यान्टोन रोडस्थित नेपाली रेस्टुरेन्टमा आगलागी हुँदा १७ जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये १३ जनालाई उद्धार गरिएकोमा १ बच्चासहित ४ पुरुष र ३ जना महिलाको मृत्यु भएको हो ।
मृत्यु हुनेको सनाखत हुन सकेको छैन । घाइते १० जनामध्ये ७ जनाको अवस्था पनि गम्भीर रहेको जनाइएको छ ।
हङकङको समयानुसार आइतबार राति करिब ८ बजेतिर आगलागी भएको थियो । जन्मदिन मनाउन बालिएको क्यान्डिलबाट आगो सल्किएको हुनसक्ने स्थानीय प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यद्यपि त्यसको पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।
घाइतेहरुलाई नजिकैको क्वीन एलिजावेथ, क्वांग वाह, प्रिन्सेस मर्गरेट अस्पताल र क्यारितास मेडिकल सेन्टरमा लगिएको छ ।
हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले याउमाइतेइमा आइतबार राति भएको आगलागीको त्रासदीबाट आफू दुखी भएको बताएकी छन् । प्रमुख कार्यकारी लामले आगलागीको घटनामा परेर घाइते भएकाको उपचार र घटनाको कारण पत्ता लगाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिएकी छन् ।
पोर्चुगलमा रेमिट्यान्सको नाममा ठगी धन्दा : रेमिट्यान्सका मालिक मर्सिडिज कारमा सरर , सेवाग्राही फोटोसप रसिद लिएर महिनौ रुदै धरर !
प्रधानमन्त्री ओली पनि टिकटकमा, केही घण्टामै १२ लाख बढी भ्युज ! (भिडियाेसहित)
नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १५ सय नाघ्यो !
एनआरएनए पोर्चुगलको १४ बर्षे इतिहासमा पहिलोपटक संघको नेतृत्व महिलालाई !
६ जना यात्रु सवार कैलाश एयरको हेलिकोप्टर आकाशमा चरासँग ठोक्किएर क्षतिग्रस्त